International Archives - Page2of 62 - Popular
မင်းသမီး Song Hye-Ko က သူ့ရဲ့ လက်ထပ်လက် စွပ်ကို မဝတ်ဆင်တော့ပဲ ကွာရှင်း ပြတ်ဆဲကြတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို မင်းသားက. . .
ပထမဆုံးသမီးလေးကို ၂ဝ၁၇ အောက်တိုဘာက မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဒုတိယကလေး အတွက် မင်းသမီးဟာ စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ သူဟာ မိခင်ကောင်းတစ် ယောက်ဖြစ်ဖို့ကို. . .
အခုလက်ရှိ မစ္စတာ ဟယ်ရစ်ဆင်ဟာ အသက် ၇၅ နှစ်ရှိနေပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လိဒ့်မြို့မှာ နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါ တယ်။ သူသိမ်းဆည်းထားခဲ့တဲ့ နဂ္ဂတစ် ဖလင်ကို သူ့ရဲ့ သားဖြစ် သူက ဓာတ်ပုံအဖြစ် ပုံနှိပ် ပြသခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။…
ဖေဖော်ဝါရီ­ ၉ ရက်က လော့စ် အိန်ဂျလိစ့်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဟောလိဝုဒ် မင်းသမီး ဂျနီဖာအက်စတန်ရဲ့ နှစ် ၅ဝ ပြည့် မွေးနေ့ပွဲကို ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ် တဲ့ ဘရက်ပစ်က တက် ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲကို တက်လာတဲ့…
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့က သတင်းများအရ မင်းသား Kim Bum နဲ့ မင်းသမီး Oh Yeon Seo တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အဆုံးသတ်သွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ မင်းသားရဲ့ အေဂျင်စီ King Kong…
အရက်မူးပြီး ကားမောင်းမိလို့ တောင်းပန်လိုက်တဲ့ မင်းသား Ahn Jae wook
မင်းသား Ahn Jae wook ဟာ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကို တရားဝင် တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါ ရီ ၁၁ နေ့က Jable Entertainment ကနေ မင်းသားဟာ အရက်မူးနေတုန်း ကားမောင်းခဲ့ တယ်ဆိုတဲ့…
၂ဝ၁၉ နိုဝင်ဘာမှာ ရုံတင်ပြသ တော့မယ့် Frozen2ဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်လမ်းနမူနာတိုတစ်ခု ဖေဖော်ဝါ ရီ ၁၃ ရက်က ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်က ရုံတင်ပြသပြီး အကြီးအကျယ် အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ Frozen 3D…
၂ဝ၁၉ မှာ Jean Company တစ်ခုက Hyolyn နဲ့ Jung Hyuk တို့ကို ပင်တိုင်မော် ဒယ်လ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာ ဓာတ်ပုံများ ထွက်ရှိတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၂ဝ၁၉ ဟာ Hyolyn…
အဆိုတော်ပင့်ခ်တစ်ယောက် အထူးချွန်အပြောင်မြောက်ဆုံး အနု ပညာရှင်တွေကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း တင်ကမ္ဗည်းတင်တဲ့ ဟောလိဝုဒ်က Walk of Fame မှာ “Pink” ဆိုတဲ့ အမည်စာလုံးကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့က သမိုင်းတင်ရေးထိုးခွင့်ရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၉…
ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ သရုပ် ဆောင်ကြေး အမြင့်ဆုံး မင်းသမီး ဂျနီဖာလော့ရင့်စ် သူ့ချစ်သူနဲ့ စေ့စပ် ကြောင်းလမ်း
နယူးရောခ်မြို့မှာ ညအလည်ထွက်လာတဲ့ ဂျနီဖာလော့ရင့်စ်ကို စေ့စပ်လက်စွပ်နဲ့အတူ တွေ့ခဲ့ကြရသူ တွေက ဓာတ်ပုံတွေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တင်ထားကြပါတယ်။ သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၈ ကတည်းက တွေ့ဆုံ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြတာလို့ . . .